I-Brain On Porn Yakho -
Dlulisa amehlo ku:
Ufuna ukwazi ukucwaninga kwakamuva emiphumeleni ye-intanethi?
Ukucabangela ukungasebenzi kocansi? Ukukhula kwezinto ezibonakalayo ngokweqile? Isifiso esiphansi sobulili obuhlukanisiwe? Ukukhathazeka komphakathi, izinkinga zokucabanga, ukungabi nesisusa?
Ulwazi olubanzi Translations
Hlola izinhlu zethu zokucwaninga eziwusizo kanye nezincazelo eziyisisekelo zesayensi.
Amaqoqo wezifundo ezisekela izimangalo ezenziwe kule website zingatholakala lapha. Futhi, ukuhlaziywa kwezifundo nezihloko ezidukisayo.
Ukuziphendukela kwemvelo akulungiselelanga ubuchopho bakho ngezocansi zanamuhla. Funda i-synopsis yemigomo eyinhloko yesayensi kumlando olula ukuwaqonda.
Inkulumo ye-TEDx kaGary Wilson
ZAMUVA I-VIDEOS NEZIHLOKO
Dlulisa amehlo kuzindaba zakho ze-Brain On Porn ezondla, ezifaka izindaba zokutakula ezintsha.
Ingabe Unenkinga Yokuhlukunyezwa Ngokocansi? Thatha Le Mibuzo
Impilo yami yocansi isithuthuke kakhulu
Ukuzwela epipini kuyathuthuka
Ukuphila kujabulisa kakhulu ngemva kokuhamba inyanga ngaphandle kwe-porn
UKUFUNDA: Ingabe ukusetshenziswa kwezithombe zocansi eziku-inthanethi kuxhumene nokungasebenzi kahle kocansi ezinsizeni? Ukuhlaziywa kwe-multivariate okususelwa kunhlolovo yomhlaba wonke esekwe kuwebhu (2021)
Iminyaka engu-18 - Owesifazane - Izinzuzo zokuyeka izithombe zocansi
Ubudala 25 - Ukusuka Erectile Dysfunction ukuya ukuhlala kanzima ngemva kocansi
Ukunqoba kwezomthetho ngokuhlukumeza / ukuhlambalaza uNicole Prause: Ungumenzi wobubi, hhayi isisulu!
Ubudala obungu-16 - Inkinga enkulu yokuba nzima
Ubudala-37: Ukuthuthukiswa kwe-libido
Umlobi odayisa kakhulu ku-Brain yakho ku-Porn, uGary Wilson, udlulile emhlabeni.
Ubudala 41 - Ucansi lumnandi kakhulu futhi angisabambezeli ukuqhanyelwa
Qala kabusha iForamu Yezwe
"Ukuqalisa kabusha" ukuphumula okuphelele kusuka ekuvuseleleni ngokocansi okufakelwayo, kufaka phakathi i-porn ye-Intanethi. Qalisa kabusha ubuchopho bakho ngesikhuthazo nemfundo ku- RebootNation.org
Konke okudingayo ukuze uphile porn mahhala futhi ujabulele ucansi futhi
Izifundo zevidiyo eziku-inthanethi ezikukhombisa igxathu negxathu ukunqanda ukusetshenziswa kocansi okuphoqelela nokuguqula ukuhlukunyezwa ngokocansi okubangelwa i-porn, yiNowa BE Church. Funda kabanzi
Isikhathi sokuthola ngempela nge-pornography ye-intanethi
Ubuchopho bakho ku-Porn buyatholakala umsindo, i-ebook, ne-backback kusukela $ 5.99. Izinguqulo eziningi ziyatholakala.
Thenga Manje Translations
"Okuyinkinga lapho abantu abasha befunda ngocansi ngokusebenzisa izithombe zobulili ezingcolile futhi bacabange ukuthi ubudlova buyingxenye evamile ... t.co/eOxtb92QFS
Joyina kabusha isizwe
"Ukuqalisa kabusha" ukuphumula okuphelele ekugqugquzelweni ngokocansi okubandakanya, kuhlanganise ne-porn. Qala kabusha ubuchopho bakho ngesikhuthazo kanye nemfundo ku
Mayelana nale Site
Ukufingqwa koMqondo oKhiye
Ubuchopho bakho ku-Porn Book
Ikhasi eliyinhloko nama-FAQ
Into ekhishwe ngu-ED
Cindezela Ukuphakama Ezinkingeni Zobulili Zentsha
Ochwepheshe Abaqaphela PIED
Yiziphi izazi ezitshela i-PIED abagulayo
Ukubuyiselwa kabusha okuyisisekelo Isihloko
Amathuluzi Wokushintsha Nokutakula
Izinketho zokusekelwa nosizo
Iseluleko Esivela Kubuyiselwa Abaphumelelayo
Ukuqalisa kabusha nokusebenzisa i-Porn FAQs
Ukubuyisela (Ukubuyiselwa kabusha) Ukuzimela Kwakho
AmaForamu, Amabhulogi, Izinkinobho
Ukufundisa Ochwepheshe Bakho
Ucwaningo Olukhulu Page
Izifundo Neurological on Abasebenzisi Porn
Izifundo Ezingabazekayo Nezidukisayo
I-ICD-11: Ukucindezeleka Kokuziphatha Kwezifiso zobulili
I-American Society ye-Addiction Medicine
Ama-Archives omsakazo we-YBOP